0-24M Pretty Ruffle လက်ရှည်အစိုင်အခဲဇာလေးနှင့်ခေါင်းလေးကိုင်ထားပြီး Romper - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
0-24M Pretty Headband နှင့်အတူအင်္ကျီလက်အစိုင်အခဲဇာပန်းထည်လေး Baby Girl Romper Ruffle
Kid Size ကို 18M 12M 6M မွေးကင်းစ
18M / ပန်းရောင် 12M / ပန်းရောင် 6M / ပန်းရောင် မွေးကင်းစ / ပန်းရောင်
0-24M Pretty Ruffle လက်ရှည်အစိုင်ပါလက်ရှည်ပါ ၀ င်ပြီးသားလက်ကိုင်အလေး - 18M / Pink backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပိတ်သိမ်းအမျိုးအစား: ဖုံးလွှမ်း Button လေး
အရွယ် Romper ရှည် တွေဆီကနေ *2အကြံပြုခေတ်
70 36 စင်တီမီတာ 25 စင်တီမီတာ 0-6 လ
80 38 စင်တီမီတာ 26 စင်တီမီတာ 6-12 လ
90 40 စင်တီမီတာ 27 စင်တီမီတာ 12-18 လ
100 42 စင်တီမီတာ 28 စင်တီမီတာ 18-24 လ
ကိုယ်ကြိုက်တယ်! နွေရာသီအဘို့အ nice အရောင်နဲ့ကိုယ့်လက်ျာ။ 16 လနှင့်ဈ 18 အဘို့အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သူမ၏အပေါ်အတိအကျကိုက်ညီ။
ငါ6လအတွင်းအမိန့်များနှင့်ကအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့တစ်ဦး Lil ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့အရည်အသွေးမြင့်ကယ့်ကိုကောင်းလှ၏
စူပါချစ်စရာ !! ဂရိတ်အရည်အသွေးကို
ပြဿနာżadenမှခန္ဓာကိုယ်piękne, Material muslinowy, kilka odstajacych nitek, ale ။ Polecam